မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): Stop Dengue. Act Now!
လိုနေတဲ့ ဘီသွေး ၆ လုံးအတွက် အလှူရှင်တွေကို ရှာလိုက်ပြီး ကလေးဆေးရုံကို ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ သွေး ၂ လုံးကို ချက်ချင်းသွင်းမယ်ဆိုလို့ သွေးလှူရှင် ၂ ယောက်ကို သွေးစစ်တယ်။ သွေးအဖြေ ထွက်လာတော့ အားလုံးအိုခေတယ် ဆိုတာနဲ့ သွေးချက်ချင်း ဖောက်ထုတ်ပြီး ကလေးလူနာမှာ သွေးသွင်းကုသပေးတယ်။ မွေးချင်းမရှိ၊ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်တဲ့အပြင် အသက်ကြီးမှ ရထားတဲ့ ကလေးဖြစ်လို့ ဆရာကြီးတို့ခမျာ ရတက်ပွေနေရှာတယ်။ သွေး ၂ လုံး သွင်းပြီးတဲ့နောက် ကလေးက နေလောင်ပန်းလို နွမ်းနေတာကနေ မိုးဆန်းပန်းလို လန်းစပြုလာတယ်။ ကလေးအဖေဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီးလည်း မျက်နှာလေး ရွှင်လာတယ်။ ဆရာဝန်တွေ သူနာပြုဆရာမတွေ သွေးလှူရှင်တွေကို ကျေးဇူးတင်စကားတွေ ဘာတွေ ပြောနိုင်လာတယ်။
ဒီလိုမျိုးနဲ့ အပြာရောင်မိုးသားအောက်မှာ လောကကြီးကို အလှဆင်မယ့် ရောင်စုံပန်းဖူးလေးတွေ ဝေမလိုနဲ့ ကြွေခဲ့ရတာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပဲ။ အချိန်နဲ့အမျှ ကြွေပြီးရင် ကြွေနေဆဲပဲ။ အဲဒါဆို ပန်းခြွေတဲ့လေက ဆေးမြီးတိုလား။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးလား။ အေဒီးစ်ခြင်လား။
Posted by Sanghaalliance at 8:40 PM